Dopamine မျိုးရိုးဗီဇနှင့်အစာအာဟာရအလွဲသုံးစားမှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှု (၂၀၁၃) - သင်၏ ဦး နှောက်သည်အပေါက်
အစားအစာနှင့်ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှု (2013) တွင် Dopamine မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ရာထူးအမည်
J ကိုမျိုးရိုးဗီဇ Syndr Gene Ther ။ 2013 ဖေဖော်ဝါရီလ 10; 4(121): 1000121 ။ Doi: 10.4172 / 2157-7412.1000121
K သည် Blum,1,3,9,* M ကအော်စကာ Berman,2 : D Barh,3 J ကို Giordano,5 နှင့် က MS ရွှေ1
ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry နှင့်အတူ DNA ကိုနှင့် polymorphic အသင်းအဖွဲ့များ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖော်ထုတ်, Psychiatry အပါအဝင်ဆေးဝါးများ၏အနာဂတ်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူ Genomics ခေတ်ထဲသို့ဝင်တော်မူပြီးမှအားလုံးစွဲလမ်းအပြုအမူတွေကိုတစ်ဦးနားလည်မှုအသစ်မှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။ ဒီမဟာဗျူဟာ (RDS) ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitry တစ်မျိုးဗီဇရောဂါ "Deficiency Syndrome ဆု" ၏သားကောင်များဖြစ်ကြသူသန်းပေါင်းများစွာတို့အတွက်ကုသမှုပေးစေခြင်းငှါမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဆောင်းပါးသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်စွဲလမ်းအစားအစာဖြစ်ခြင်းနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်လျက်, dopamine ပို့ဆောင်ရေး, နှင့်ဆိုဒီယမ်အစားအစာများ၏အပြန်အလှန်အပါအဝင်စှဲအတွက် dopamine မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ function ကို၏အခန်းကဏ္ဍကို, အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ခေတ္တမျိုးစုံ-စှဲ (RDS) ၏မျိုးဗီဇ antecedents စိုးရိမ်သောငါတို့အယူအဆပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ လေ့လာရေးကိုလည်းထူထောင်ဆုလာဘ်မျိုးဗီဇနှင့် polymorphic တစ် panel ကိုအကဲဖြတ် RDS မှမျိုးဗီဇအန္တရာယ်များ၏ stratification ဖွကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ panel ကိုကို "မျိုးဗီဇစွဲအန္တရာယ်ရမှတ် (GARS)" ဟုခေါ်တွင်ခြင်း, RDS တစ်မျိုးဗီဇ၏ရောဂါများအတွက် tool ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစမ်းသပ်မှုများအသုံးပြုမှု, အခြားသူများအားဖြင့်ထောက်ပြအဖြစ်တစ်စောစောစီးစီးအသက်အရွယ်မှာအန္တရာယ်တစ်ဦးချင်းစီမှာဖော်ထုတ်နေဖြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝုိင်းအကြိုးရှိလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်နှင့်အစွဲ၏လူ့မော်ဒယ်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက်အတိမ်အနက်ကိုအလုပ်အတွက်တိုက်တွန်းပါသည်။ ကျနော်တို့အစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲအကြားဆင်တူရိုးမှား၏ neurogenetic ဆက်စပ်မှုထပ်မံရှာဖွေရေးအားပေးနှင့် "ဆားစားနပ်ရိက္ခာစွဲ Hypothesis" ကဲ့သို့ယူဆချက်စဉ်းစားရှေ့ဆက်ထောက်ခံ။
keywords: အစားအသောက်စွဲလမ်း, ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု Disorder (Sud), Deficiency Syndrome (RDS), Dopaminergic ဗီဇ polymorphic, Neurogenetics ဆု
Dopamine (DA) သာယာဝပြောရေး၏ခံစားချက်များကိုထိန်းချုပ်သောဦးနှောက်ထဲမှာ neurotransmitter ဖြစ်ပါသည်။ DA နှင့်ထိုကဲ့သို့သော serotonin, အ opioids နှင့်အခြားဦးနှောက်ဓာတုပစ္စည်းအဖြစ် neurotransmitters များ၏အပြန်အလှန်အနေဖြင့်ရလဒ်တွေကို wellbeing ၏ဤအသိ။ အနိမျ့ serotonin အဆင့်ဆင့်စိတ်ကျရောဂါနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ အဆိုပါ opioids (ဦးနှောက်ရဲ့ဘိန်း) ၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းလည်း [သာယာဝပြောရေးတစ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်1] ။ ထိုမှတပါး, DA receptors G-ပရိုတိန်း coupled receptors (GPCRs) ၏အဆင့်အတန်း, [, အာရုံကြောစိတ်ရောဂါနှင့် Ocular မမှန်များ၏ကုသမှုများအတွက်မူးယစ်ဆေးဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပစ်မှတ်ထားပြီ2] ။ [DA က "Anti-စိတ်ဖိစီးမှု" နှင့် / သို့မဟုတ် "အပျော်အပါး" မော်လီကျူးကိုခေါ်ထားပြီး, သို့သော်ဤမကြာသေးမီက Salamone နှင့်ကော်ရဲရားအားဖြင့်အခြေအတင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည်3] နှင့် Sinha .
ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ [စောဒကတက်ခဲ့ကြ5-8] နျူကလိယ (NAc) DA စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်အခန်းကဏ္ဍနှင့် mesolimbic DA ကမောက်ကမဖြစ်မှု [စိတ်ကျရောဂါ၏စိတ်ခွန်အားနိုးရောဂါလက္ခဏာတွေမှပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အခြားရောဂါ၏အင်္ဂါရပ်များအထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည် accumbens ကြောင်း3] ။ ဒါဟာဆုလာဘ်အာရုံခံအဖြစ် DA အာရုံခံတံဆိပ်ကပ်ဖို့ရိုးရာဖြစ်လာခဲ့သော်လည်း, ဒီတစ်ခုကျော် General ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်လှုံ့ဆျောမှု၏ရှုထောင့် dopaminergic ထိန်းသိမ်းရေးကြောင့်ထိခိုက်နေကြသည်ကိုဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားသောစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, NAc DA Pavlovian ဖြစ်စဉ်များနှင့်ဆာပသင်ယူမှုအစာစားချင်စိတ်-ချဉ်းကပ်အပြုအမူ, ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆျောမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ကနဦးငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, စားရန်လှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်ဖျန်ဖြေပါဘူးပေမယ့်, အမူအကျင့်ကို Activation ဖြစ်စဉ်များအားထုတ်မှုများ၏တာဝန်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်ခေတ္တခဏကြံ့ကြံ့ခိုင်ရပ်တည် [3,5-7].
က NAc DA အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိစိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းမှန်ပေမယ့်ကျွန်တော် DA ကိုလည်းအလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဆင်တူမူလတန်းအစားအစာလှုံ့ဆျောမှုသို့မဟုတ်အစာစားချင်စိတ်အတွက်အရေးပါသောဖျန်ဖြေအဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းငြင်းခုန်။ စာပေ၏တစ်ဦးကသုံးသပ်မှု [အစားအစာတဏှာအပြုအမူနှင့်အစာစားချင်စိတ်ဖျန်ဖြေခြင်းအတွက် DA ၏အရေးပါမှုကိုပြသသောစာတမ်းများ၏နံပါတ်ပေးသည်6,7] ။ ရွှေ [အစားအသောက်စွဲလမ်း၏အယူအဆရှေ့ဆောင်ထားပါတယ်5-8] ။ Avena et al ။  မှန်ကန်စွာစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကသဘာဝဆုလာဘ်တုံ့ပြန်ရန်ပြောင်းလဲသောတူညီအာရုံကြောလမ်းကြောင်း avtivate သောကွောငျ့, အစားအစာကိုမှစွဲလမ်းယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်ပုံငြင်းခုန်။ ထိုမှတပါး, သကြားနှုန်း se opioids နှင့် DA ဖြန့်ချိခြင်းနှင့်အရှင်စွဲလမ်းအလားအလာရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားစေခြင်းငှါတစ်ဦးပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်မှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးအာရုံကြောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်သည့် NAc အတွက် DA ပြောင်းလဲမှုများနှင့် opioid အဲဒီ receptor binding, enkephalin mRNA စကားရပ်နှင့် DA နှင့် acetylcholine လွှတ်ပေးရန်ပါဝင်သည်။ အဆိုပါသက်သေအထောက်အထားများအချို့သောအခြေအနေများတွင်ကြွက်တွင်းသကြားဓာတ်ကိုမှီခိုဖွစျလာနိုငျသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။
ဝမ် et al ၏လုပျငနျး။  လူသားဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများနှငျ့ပတျသကျသောရောဂါဗေဒစားအပြုအမူ (s) တွင် DA-modulated ဆားကစ်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများ striatum ရဲ့ extracellular အာကာသအတွင်း DA အစားအသောက်တွေကိုတိုးပွားလာကြောင်းအကြံပြုသည်ဤ DA အစားအစာ non-hedonic စိတ်ခွန်အားနိုးဂုဏ်သတ္တိများအတွက်အလားအလာပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကအစကဒီဒေသအစားအစာစားသုံးမှု၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေဘို့လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းညွှန်ပြ orbitofrontal cortex ဇီဝြဖစ်အစားအသောက်တွေကိုတိုးပွားလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အရှင်အဝလွန်ဘာသာရပ်များနှိုးဆွပေးဆုလာဘ်ဆားကစ်အောက်မှာများအတွက်ယာယီလျော်ကြေးပေးရန်အစားအစာကိုသုံးစွဲဖို့ predisposed စေခြင်းငှါဆေးစွဲဘာသာရပ်များအတွက်လျော့ချရေးဆင်တူအဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက် striatal DA D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုအတွက်လေ့လာသူလျော့ချရေး, [ရှိပါတယ်11] ။ အနှစ်သာရအတွက်, အစားအသောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးနှစ်ဦးစလုံး၏အစွမ်းထက်အားဖြည့်သက်ရောက်မှုတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက် mesolimbic ဦးနှောက်ဆုလာဘ်စင်တာများအတွက်ရုတ်တရက် DA တိုးကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ Volkow et al ။  ရုတ်တရက် DA တိုးဦးနှောက်ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ဦးချင်းစီ၏အတွင်း homeostatic ထိန်းချုပ်မှုယန္တရားနိူင်တယ်ကြောင်းထောက်ပြနေသည်။ ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်း၏ shared features တွေထုတ်ပေးသောအာရုံကြောကမောက်ကမဖြစ်မှု deliniated ပါပြီ။ စွဲလမ်း၏အမြစ်အကြောင်းတရားများ၏ဘုံ၏အုတ်မြစ် [Self-ထိန်းချုပ်မှုတို့နှင့်လည်းဆက်စပ်အာရုံခံစနစ်များကိုထိန်းညှိသော dopaminergic လမ်းကြောင်းထဲမှာချို့ယွင်း, အေးစက်, စိတ်ဖိစီးမှု reactivity ကို, ဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများမှာ11] ။ prefrontal ဒေသများတွင်ဇီဝြဖစ် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပါဝင်ပတ်သက်နေသည်, အစားအစာစားသုံးမှုကန့်သတ်ရန်မှအဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း ghrelin ကပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းနှင့်လျော့နည်းသွား prefrontal ဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောလျော့နည်းသွား DA D2 receptors ၏ရလဒ်ဖြစ်မည်အကြောင်း  ။ လှုံ့ဆျောမှု, memory နဲ့ Self-ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်အဆိုပါ limbic နှင့် cortical ဒေသများ [အဝလွန်ဘာသာရပ်များအတွက်အစာအိမ်ဆွခြင်းဖြင့် activated နေကြတယ်10] နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-စွဲဘာသာရပ်များအတွက်မူးယစ်ဆေးတဏှာကာလအတွင်း။ အစားအစာများ၏အာရုံခံဂုဏ်သတ္တိများတစ်ခုတိုးမြှင် sensitivity ကိုအဝလွန်ဘာသာရပ်များ၏ somatosensory cortex အတွက်တိုးလာဇီဝြဖစ်နေဖြင့်အကြံပြုသည်။ လျှော့ DA D2 receptors နှင့်အတူ coupled အစားအစာအာခေါင်မှဤသည်မှာတိုးမြှင် sensitivity ကို [အစားအစာ compulsive စားနှင့်အဝလွန်ခြင်းအန္တရာယ်များအတွက်အဓိကစစ်ကူစေနိုင်ခြင်း10] ။ ဤသုတေသနရလဒ်များကိုမြောက်မြားစွာဦးနှောက်ဆားကစ်အဝလွန်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲလမ်းအတွက်နှောင့်အယှက်များနှင့်အဝလွန်ခြင်း၏ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်ကုသမှုတိုးတက် DA function ကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းမဟာဗျူဟာမှအကျိုးစေခြင်းငှါဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
Lindblom et al ။  က Bing နှင့်အလေးချိန်ပြန်လည်ဦးဆောင်အစားအစာမတရားသောဖြစ်ပေါ်စေသည်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချဖို့မဟာဗျူဟာအဖြစ် dieting မကြာခဏပျက်ကွက်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအစသုတေသနအများအပြားလိုင်းများအနေဖြင့်အထောက်အထားအစားအစာနှင့်မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောစည်းမျဉ်းအတွက် shared ဒြပ်စင်၏ရှေ့မှောက်တွင်အကြံပြုကြောင်းသဘောတူသည်။ Lindblom et al ။  အရေအတွက် Real-time polymerase ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကိုအသုံးပြုပြီးနာတာရှည်အစားအသောက်ကန့်သတ်အကြောင်းမဲ့အထီးကြွက်များတွင် mesolimbic နှင့် nigrostriatal DA စနစ်နှင့်ဆက်စပ်သောဦးနှောက်ဒေသများတွင် DA အချက်ပြပါဝင်ပတ်သက်ရှစ်မျိုးဗီဇ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျး quantified ။ သူတို့ဟာ tyrosine hydroxylase ၏ mRNA အဆင့်ဆင့်ကို၎င်း, ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းရှိ dopamine Transporter ပြင်းထန်စွာ NAc ၏ shell ကိုအတွက်ပရိုတိန်းအဆင့်မှာတက်-စည်းမျဉ်းအစားအစာကန့်သတ်ခြင်းနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းပါ DAT တိုးပွားလာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့လည်းအရေအတွက် autoradiography ကနေတဆင့်ကြည့်ရှုလေ့လာခဲ့သည်။ နာတာရှည်ထက်စူးရှသောအစားအစာကိုကန့်သတ်သည့် mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်း၏ာင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြစေခြင်းငှါအကြံပြုပြီးနောက်, ဤဆိုးကျိုးများလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် NAc shell ကိုထံမှ extracellular dopamine ၏တိုးလာရှင်းလင်းရေးမှဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်ာင်းအစားအသောက်လိုက်နာမှုဆီးတားသောအစားအစာကိုမတရားသောများအတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားများထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပက် et al နေဖြင့်အစောပိုင်းကတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့သဘောတူညီချက်၌ရှိကြ၏။  ။ သူတို့ဟာ DA reuptake Transporter DAT များအတွက် mRNA အဆင့်ဆင့်အတွက်တိုးလာအတွက်အင်ဆူလင်ရလဒ်များကြောင့်တိုက်ရိုက် intracerebroventricular ပြုတ်ရည်သရုပ်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဦး 24- ခုနှစ်တွင် 36 နာရီမှအစားအစာဟာဆင်းရဲချို့တဲ့လေ့လာမှု Hybrid အသုံးပြုခဲ့သည် On-site ကို အစားအစာ-ဆုံးရှုံး (hypoinsulinemic) ကြွက်များတွင် DAT mRNA အဆင့်ဆင့်အကဲဖြတ်ဖို့။ သိသိသာသာ striatal DAT function ကို၏ဖြည့်ညှင်းအာဟာရအခြေအနေ, အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အင်ဆူလင်အားဖြင့်ထိခိုက်နိုင်အကြံပြုခြင်းလျော့နည်းသွား compacta အဆင့်ဆင့်ဟာ ventral tegmental ဧရိယာ / substantia nigra ပိုဒျရှိကြ၏။ Ifland et al ။  သကြားဓာတ်မြင့်မားတဲ့ပြင်းအားနှင့်အခြားသန့်စင်ပြီးဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်, သန့်စင်ပြီးဘိုဟိုက်ဒရိတ်, အဆီ, ဆား, နှင့်ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူအစားအစာများကိုစွဲလမ်းတ္ထုများဖြစ်ကြသည်လုပ်ငန်းများ၌သောအယူအဆကြရပြီ။ တခြားလေ့လာမှုအစားအစာရှာအပြုအမူအတွက်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ဆားအကဲဖြတ်ပါပြီ။ Roitman et al ။  သ NAc အတွက် DA ဂီယာ Na အစာစားချင်စိတ်များအပါအဝင်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ, ဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တိုးပွားလာကြောင်းထောက်ပြသည်။ DA ဂီယာ DAT အားဖြင့် modulated နှင့်လှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေအတွက်အခန်းကဏ္ဍလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့၏လေ့လာမှုများအတွက် Vivo အတွက်, ကြွက် NAc အတွက် DAT မှတဆင့် DA လွှာမှအတွက်ခိုင်မာတဲ့လျှောက်လျော့နည်းဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့် Na အစာစားချင်စိတ် Na ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်။ အဆိုပါ NAc အတွက် DAT လှုပျရှားမှုလျော့နည်းသွားပြီးနောက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည် စသည်တို့အတွက် Aldosterone ကုသမှု။ ထို့ကြောင့် DAT လှုပျရှားမှုတစ်လျှော့ချရေး, အ NAc အတွက် Aldosterone တစ်တိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်မှုများ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်နိုင်သည်နှင့် Na လျော့ကျ Na အစာစားချင်စိတ်အတွင်းမှာတိုးမြှင့် NAc DA ဂီယာ၏မျိုးဆက် induces ပေးသောအားဖြင့်တစ်ဦးယန္တရားဖြစ်နိုင်သည်။ တိုးမြှင့် NAc DA အဆိုပါ Na-ကုန်ခမ်းကြွက်များအတွက်လှုံ့ဆျောမှုပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ Cocores နှင့်ရွှေတို့ကအဆိုပြုထားအဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုဖြစ်နိုင်သောပစ္စည်းဥစ္စာ (အစားအစာ) အဖြစ်ဆားအစားအစာများ၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ထပ်မံထောက်ခံကြောင်း [က "ဆားစားနပ်ရိက္ခာစွဲ Hypothesis" တွင်ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်17] ။ ဆားနယ်အစားအစာများကိုကျော်နှင့်အလေးချိန်အမြတ်မောင်းသောပျော့ opiate agonist တူသောပြုမူလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်တစ်ဦးရှေ့ပြေးလေ့လာချက်မှာတော့သူတို့တစ် opiate မှီခိုအုပ်စုတစ်စုဆားစားစရာဘို့ခိုင်ခံ့ preference ကိုဖေါ်ပြခြင်း opiate ဆုတ်ခွာစဉ်ကအလေးချိန်တစ် 6.6% တိုးဖွံ့ဖြိုးကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှင့်အခြားစာပေအပေါ်အခြေခံပြီး  အစဉ်ငန်အစားအသောက်ဦးနှောက်၏ဆုလာဘ်များနှင့်ပျော်မွေ့စင်တာအတွက် opiate နှင့် DA receptors လှုံ့ဆော်တဲ့စွဲလမ်းပစ္စည်းဥစ္စာမည်အကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ တနည်း, preference ကို, ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု, တိုက်တွန်း, နှင့် "အရသာ" ဆားစားစရာဘို့တဏှာ opiate ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ငန်အစားအစာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကဲ့သို့ opiate လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ငန်အစားအစာများနှင့် opiate ဆုတ်ခွာနှစ်ဦးစလုံးဟာ Na အစာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်, တိုးမြှင့်ကယ်လိုရီစားသုံးမှုမှု, overeating နှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများ။
ဦးနှောက် Dopaminergic ရာထူးအမည်
Dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇ (DRD2)
Synaptic, DA DA receptors (D1-D5) လှုံ့ဆော်သည့်အခါ, တစ်ဦးချင်းစီ [စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရေးနှင့်သာယာဝပြောရေး၏ခံစားချက်များကိုတွေ့ကြုံခံစား19] ။ အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း, mesocorticolimbic dopaminergic လမ်းကြောင်းသဘာဝဆုလာဘ်နှင့်သဘာဆုလာဘ်နှစ်ဦးစလုံး၏အားဖြည့် mediates ။ သဘာဝဆုလာဘ်ဝယ်ယူသင်ယူအပျော်အပါး, မူးယစ်ဆေးဝါး, အရက်, လောင်းကစားနှင့်အခြားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူတွေကနေဆင်းသက်လာသူကဲ့သို့ hedonic အာရုံ [၏စိတ်ကျေနပ်မှုပါဝင်နေစဉ်သဘာဝ drives တွေကိုထိုကဲ့သို့သောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်မျိုးပွားအဖြစ်ဇီဝကမ္မ drives တွေကိုအားဖြည့်နေကြ8,20,21].
တစ်ခုမှာထင်ရှားတဲ့ DA ဗီဇ [DA D2 receptors တွေရဲ့ပေါင်းစပ်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်သော DRD2 ဗီဇဖြစ်ပါသည်22] ။ အဆိုပါ DRD2 ဗီဇ (A1 နှိုင်းယှဉ် A2) ၏ allelic ပုံစံ [Post-Junction က်ဘ်ဆိုက်များနှင့် hypodopaminergic function ကိုမှာ receptors ၏နံပါတ်ဆိုထားသည်23,24] ။ DA receptors ၏တစ်ဦးကနည်းပါး [သည့် dopaminergic system ကိုလှုံ့ဆော်သည်ဟုမဆိုပစ္စည်းဥစ္စာသို့မဟုတ်အပြုအမူကိုရှာခြင်းငှါတစ်ဦးချင်းစီ predisposes25-27].
အဆိုပါ DRD2 ဗီဇနှင့် DA ရှည်လျား [ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်ပြီ28] အငြင်းပွားဖွယ်ရာများကြားမှ [3,4] ။ အဆိုပါ DRD1 ဗီဇ၏ Taq1 A2 allele ဖြစ်သော်လည်းများစွာသောအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်နဲ့ဆက်စပ်ခြင်းနှင့်ကနဦးပြင်းထန်ရက်နှင့်အတူထားပြီး, ကတခြားပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အဖြစ်, Tourette ရဲ့ Syndrome, မြင့်သောအသစ်အဆန်းအပြုအမူတွေကိုရှာ Attention Deficit Hyperactivity Disorder ဖြစ်ပါတယ် co-နေကြလို့ပဲ antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါလက္ခဏာတွေနှင့်အတူ (ADHD), နှင့်ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက် .
ဤဆောင်းပါးတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အစားအစာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်စွဲလမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့်စှဲအတွက် DA မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ function ကို၏အခန်းကဏ္ဍကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, ပြည့်စုံဘို့ကျနော်တို့ခေတ္တမျိုးစုံ-စှဲ၏မျိုးဗီဇ antecedents စိုးရိမ်သောငါတို့အယူအဆပြန်လည်သုံးသပ်ပါလိမ့်မယ်။ (RDS) "Deficiency Syndrome ဆု" ပထမဦးဆုံး [သည့် DRD1996 A2 မျိုးရိုးဗီဇမူကွဲသည်ဤအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းသဘောပေါက်အတူ compulsive စွဲလမ်းနှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူတစ်ခုသီအိုရီမျိုးဗီဇခန့်မှန်းအဖြစ် 1 တှငျဖျောပွထားခဲ့ပါတယ်29-32] ။ RDS DA အပေါ်အားကိုးသောပျော်မွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ယန္တရားများပါဝငျသညျ။ DA ခုခံသို့မဟုတ်လျော့ကျ၏အကျိုးဆက်ဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူတွေသို့မဟုတ်အခြေအနေများ [RDS ၏သရုပ်များမှာ30] ။ တစ်ဦးချင်းရဲ့အထဲကဓာတုပစ်စညျးဆုလာဘ်ချို့တဲ့, စသညျ့သို့မဟုတ်စိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပြင်းထန်, မျိုးဗီဇမိတ်ကပ်အပေါ်အခြေခံပြီးတစ်ဦး DA ချို့တဲ့ခြင်း၏ရလဒ်များ၏ရလဒ်ပျော့စေနိုင်ပါတယ်။ RDS သို့မဟုတ် Anti-ဆုလာဘ်လမ်းကြောင်းမျိုးဗီဇကွဲလွဲချက်များရှုပ်ထွေးထစ်အငေါ့အပြုအမူမှမြင့်တက်ပေးနိုင်ပါသည်ဘယ်လိုအချို့ရှင်းပြဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ စိတ်ရောဂါမမှန်ခြင်းနှင့်မျိုးစုံစွဲလမ်းတဲ့အရေအတွက်တစ်ဘုံ neurobiology, neuro-circuitry နှင့် neuroanatomy ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကောင်းစွာအမှန်ပင်အလွဲသုံးစားမှု, အရက်, လိင်, အစားအစာ, လောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ရန်လိုစိတျလှုပျရှားစရာ၏ .drugs, အရှိဆုံးအပြုသဘောစစ်ကူအကြောင်းမရှိ activation နှင့်ဦးနှောက် DA ၏အာရုံခံလွှတ်ပေးရန်နှင့်အပျက်သဘောခံစားချက်တွေကိုလျှော့နိုင်သောလူသိများသည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောမတရားသောအနိမ့် DA function ကိုဆက်စပ်နေကြသည်  ။ ဤတွင်သီးခြားမျိုးဗီဇ antecedents ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ရှုပ်ထွေးအပြုအမူတွေ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာတစ်ခုချို့တဲ့သည်, D2 [သည့် DRD1 ဗီဇ၏ A2 မူကွဲရှိခြင်း၏အကျိုးဆက် receptors34] စွဲလမ်းမျိုးစုံထကြွလွယ်သော, နှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောအပြုအမူအားဖြင့်ကျေနပ်နိုင်မတရားသောအဘို့အမြင့်မားသောအန္တရာယ်မှတစ်ဦးချင်းစီ predispose လိမ့်မည်။ တစ်ဦးချင်းစီဥပမာအတွက် synapses ထံမှ DA အလွန်အကျွံဖယ်ရှားရေးအတွက်ရလဒ်သော DAT ဗီဇအခြား polymorphic ခဲ့လျှင်ဒီချို့တဲ့ပိုဆိုးနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တ္ထုများနှင့် aborant အပြုအမူတွေ၏အသုံးပြုမှုကိုလည်း DA ပျက်ဆီး။ ထို့ကြောင့် RDS သာမန်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများထံမှဆုလာဘ်ရရှိမယ့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးနိုင်ခြင်းအကျိုးဆက်ဖြစ်ကြောင်းပြင်းထန်သို့မဟုတ်ပျော့ပုံစံများ၌ထငျရှားရှိနိုင်ပါသည်။ အမြားအပွားဗီဇနှင့် polymorphic ပုံမှန်မဟုတ်သော DA function ကိုမှတစ်ဦးချင်းစီ predispose သော်လည်း, DRD1 ဗီဇမရှိခြင်းအလုံအလောက် DA အဲဒီ receptor က်ဘ်ဆိုက်များ၏ Taq1 A2 allele ၏သယ်ဆောင်လုံလောက်သော DA sensitivity ကိုအောင်မြင်ရန်။ ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့စားချင်နှင့်တဏှာအတွက်ဦးနှောက်နိုင်ရလဒ်အကျိုးကို site ကို၌ဤ DA လိုငွေပြမှု။ အနှစ်သာရမှာတော့သူတို့အရက်, opiates, ကင်း, နီကိုတင်း, ဂလူးကို့စနှင့်အပြုအမူများကဲ့သို့တ္ထုများရှာအံ့သောငှါ, dopaminergic လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်နှင့် NAc မှာ DA ၏ဦးစားပေးဖြန့်ချိစေလူသိများကြသည်ပင်သညျ့ပြင်းထန်တဲ့အပြုအမူတွေ။ အဆိုပါ anterior cingulate cortex အောင်အော်ပရေတာ, အားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါ, အစား NAc ထက်ကြောင်းအထောက်အထား [ယခုရှိပါသည်35-37] နှင့် relapse ၏ site တစ်ခု။
ပုံမှန်ဦးနှောက် function ကိုခေါ် DRD2 ဗီဇသို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော homeostasis မှာပါဝင်နေတဲ့ DRD1 ကဲ့သို့သောအခြား DA အဲဒီ receptor မျိုးရိုးဗီဇအတွက်ဒါချို့ယွင်း, နောက်ဆုံးမှာအပြုအမူရှာကြံထစ်အငေါ့မူးယစ်ဆေးနှင့်အစားအစာအပါအဝင်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးအတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအမျိုးအနွယ်၏ neurochemical ပြည်နယ်၏လေးနက်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပြသလျက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကား [အီသနောတို့ပါဝင်သည်38]; ဆေးခြောက် ; ဘိန်းဖြူ ; ကိုကင်း ; ယေဘုယျအားဖြင့်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု  ။ အများစုမှာမကြာသေးမီက Novak et al ။  striatal အာရုံခံ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောဖှံ့ဖွိုးတိုးအဓိကစိတ်ရောဂါနာမကျန်းအခြေခံသည့်ရောဂါဗေဒ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းခိုင်မာတဲ့သက်သေအထောက်အထားဖြစ်သည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာအရေးကြီးသော striatal အဲဒီ receptor လမ်းကြောင်း (အချက်ပြ) ကင်းမဲ့ကြောင်းကြွက်များတွင်ဖွံ့ဖြိုးမှုမျိုးဗီဇကွန်ရက် (အစောပိုင်း) ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ နှစ်ခု postnatal ရက်သတ္တပတ်မှာကွန်ယက်ချ DA D1 နှင့် D2 receptors အပါအဝင်နှင့်သူတို့၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် phenotypic ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူဤအအာရုံခံပေး striatal-သတ်သတ်မှတ်မှတ်မျိုးဗီဇဖော်ပြရင့်ကျက်ဗီဇ၏ကွန်ယက်အားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့်အစားထိုးနေသည်။ ထို့ကြောင့်ကြွက်နှင့်လူ့နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ switch သည်ထိုကဲ့သို့သောဆားနဲ့တူအစားအစာများ, နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတစ်ခုစသညျ့အဖြစ် enviromental အချက်များအားဖြင့်တိုးတက်မှု၏နှောင့်အယှက်မှလွယ်ကူစွာထိခိုက်တဲ့အချက်ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိပါတယ်။
အဆိုပါ DA Transporter (စ DA တက်ကြွပို့ဆောင်ရေး, DAT, SLC6A3) [အခြားအလူသိများပို့ဆောင်ရေးအကြာတွင်သိုလှောင်မှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲလွှတ်ပေးရန်အာရုံခံတွေ့နေကျမဟုတ်သောသို့ DA နှင့် norepinephrine sequester ရာမှနောက်ကျော cytosol သို့ synapses ထဲက neurotransmitter DA ညှစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အမြှေးပါး-spanning ပရိုတိန်းဖြစ်ပါသည်44].
အဆိုပါ DAT ပရိုတိန်းကြောင့်5အကြောင်းကို kbp ရှည်လျားသည်နှင့် 64 coding exon ပါဝင်ပါသည်လူ့ခရိုမိုဆုန်း 15 ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးတစ်ဗီဇအားဖြင့် encoded ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် DAT ဗီဇ (SLC6A3 သို့မဟုတ် DAT1) ခရိုမိုဆုန်း 5p15.3 မှဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီနေသည်။ ထိုမှတပါး, DAT3 ၏ 1 '' Non-coding ဒေသအတွင်း VNTR polymorphic ရှိသေး၏။ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုပရိုတိန်းပမာဏကို effects သော DAT ဗီဇထဲမှာတစ်ဦးကမျိုးဗီဇ polymorphic [နှင့် DA related မမှန်ခြင်းနှင့် DAT အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့များအတွက်သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်45] ။ ဒါဟာကောင်းစွာ DAT DA reuptake norepinephrine [ပါဝငျသညျရှိရာ prefrontal cortex အတွက် မှလွဲ. synapses ထံမှ DA ရှင်းလင်းရေးသောမူလတန်းယန္တရားကြောင်းကိုတည်တတ်၏46,47] ။ DAT အဆိုပါ Synaptic ကွဲမှအ DA ဖယ်ရှားခြင်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆဲလ်ထဲသို့ depositing အားဖြင့် DA signal ကိုအဆုံးသတ်။ အရေးကြီးတာက [ဆုလာဘ်များနှင့်အခြားသောကောင်းကျိုးအများအပြားရှုထောင့် DA ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုဖြစ်ကြပြီး DAT DA အချက်ပြ၏စည်းမျဉ်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်48].
ဒါဟာ DAT အဆိုပါလြှပျစစျ gradient ကို (facilitated ပျံ့နှံ့) အရေးပါသောအမြှေးပါးပရိုတိန်းသည်နှင့်တစ်ဦး symporter စဉ်းစားသည်နှင့် Na များ၏လှုပ်ရှားမှုကိုရန်၎င်း၏လှုပ်ရှားမှုနားဆက်မှီရာတွင်အားဖြင့် phospholipids ဆဲလ်အမြှေးပါးကိုဖြတ်ပြီး Synaptic ကွဲထဲကနေ DA ရွေ့လျားတစ် Co-Transporter ချအိုင်းယွန်းကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် ဆဲလ်သို့။
ထိုမှတပါး, DAT function ကို DA အလွှာနှင့်အတူ sequential စည်းနှောင်နှစ်ယောက် Na အိုင်းယွန်းများ၏ Co-သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်တဦးတည်းကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းလိုအပ်သည်။ DAT-mediated DA reuptake များအတွက်မောင်းနှင်အား [သည့်ပလာစမာအမြှေးပါး Na + / K + ATPase ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အိုင်းအာရုံစူးစိုက်မှု gradient ကိုဖြစ်ပါတယ်49].
Sonders et al ။  monoamine Transporter function ကိုများအတွက်ကျယ်ပြန့်-လက်ခံခဲ့သည်မော်ဒယ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကဲဖြတ်။ သူတို့ကသာမန် monoamine Transporter function ကို set ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုအပ်သည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ DA ခညျြနှောငျနိုငျသညျရှေ့တျော၌ဥပမာအားဖြင့်, Na အိုင်းယွန်းဟာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် extracellular ဒိုမိန်းခညျြနှောငျရမညျဖွစျသညျ။ DA ခညျြနှောငျပြီးတာနဲ့ပရိုတိန်း Na နှင့် DA နှစ်ဦးစလုံးဟာအမြှေးပါးများ၏ intracellular ဘက်မှာ unbind ခွင့်ပြုထားတဲ့ညီညွတ်မှုပြောင်းလဲမှု, ခြင်းကိုသည်းခံ။ electrophysiological လေ့လာမှုအတော်များများ DAT သည်အခြား monoamine ပို့ဆောင်ရေးတူသောသူတဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦး Na အိုင်းယွန်းနှင့်အတူအမြှေးပါးကိုဖြတ်ပြီး neurotransmitter တွေထဲကမော်လီကျူးသယ်ယူပို့ဆောင်အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုးစွဲချက်တင်ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းအပြုသဘောတာဝန်ခံတစ်ဦး buildup ကာကွယ်တားဆီးဖို့လိုအပ်သည်။ ဒီလေ့လာမှုတွေကရေဒီယိုသတ္တိကြွ-တံဆိပ်ကပ် DA အသုံးပြုသောလည်း [သည့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှုနှုန်းနှင့်ဦးတည်ချက်ကတော့ Na gradient ကိုအပေါ်လုံးဝမှီခိုဖြစ်ကြောင်းပြသကြ51].
ကကောင်းစွာ [အလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေးအာရုံခံ DA များလွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုလူသိများသည်ကတည်းက52] DAT ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အခန်းကဏ္ဍရှိနိုင်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမြှေးပါးအလားအလာနှင့် Na gradient ကို၏တင်းကျပ်စွာနားချင်းဆက်မှီ၏, အမြှေးပါး polarity ကအတွက်လှုပ်ရှားမှု-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများသိသိသာသာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှုန်းထားများသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ အဆိုပါအာရုံခံဆဲလျ depolarizes သည့်အခါထို့အပြင် Transporter [DA လွှတ်ပေးရန်အထောက်အကူပြုစေခြင်းငှါ53] ။ အနှစ်သာရမှာတော့ Vandenbergh et al ခြင်းဖြင့်ထောက်ပြအဖြစ်။  သ DAT ပရိုတိန်း DA လျင်မြန်စွာ synapses သို့ဖြန့်ချိခဲ့ DA စုဆောင်းခြင်းဖြင့် neurotransmission -mediated ထိန်းညှိ။
အဆိုပါ DAT အမြှေးပါး topology အဆိုပါဂါဘမြို့သားသယ်ယူပို့ဆောင် hydrophobic sequence ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်တူညီအပေါ်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ထား, ပိုင်းတွင်သီအိုရီဖြစ်ခဲ့သည်။ Kilty et al ၏ကနဦးခန့်မှန်း။  တဆယ်နှစ်လုံးကို transmembrane domains များ၏တတိယနှင့်စတုတ္ထအကြားကြီးမားတဲ့ extracellular ကွင်းဆက်၏ [Vaughan နှင့် Kuhar ကအတည်ပြုခဲ့သည်56] သူတို့သေးငယ်အပိုင်းအစများသို့ပရိုတိန်းတွေဟာအစာကြေဖို့, proteases အသုံးပြုသောအခါ, နှင့် glycosylation, DAT ဖွဲ့စည်းပုံမှာအများစုရှုထောင့်ကိုအတည်ပြုရန်, extracellular ကွင်းပေါ်တွင်သာဖြစ်ပေါ်ရာ။
DAT dopaminergic circuitry အရပ်၌ဦးနှောက်၏ဒေသများမှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါဧရိယာ [mesocortical mesolimbic နှင့် nigrostriatal လမ်းကြောင်းများပါဝင်သည်57] ။ ဤအလမ်းကြောင်းဖွင့်ပါစေသောအရေးပါစကားရပ်၏ကွဲပြားပုံစံများရှိသည်။ DAT DA အဆိုပါ Synaptic ကွဲထဲကနေ diffused ပြီး striatal DA reuptake အဆိုပါ Synaptic တက်ကြွဇုန်ပြင်ပဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအကြံပြုပေးသောမည်သည့် Synaptic ကွဲအတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိမခံခဲ့ရပါဘူး။
နှစျခု alleles, အ9ထပ် (9R) နှင့် 10 ထပ် (10R) VNTR RDS အပြုအမူတွေများအတွက်အန္တရာယ်တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ အဆိုပါ 9R VNTR ၏ရှေ့မှောက်တွင်အရက်နှင့်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှု Disorder နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဒါဟာ [DA အတွက်လျော့ချရေးအတွက်ရရှိလာတဲ့, Synaptic DA တစ်ခုတိုးမြှင်ရှင်းလင်းရေးအတွက်ရရှိလာတဲ့အတွက် DAT ပရိုတိန်း၏ကူးယူတိုးပွားပြနှင့် postsynaptic အာရုံခံ၏ DA activation ထားပြီး58] ။ ယင်း DAT ၏တွဲဖက်ပြန်လုပ် [ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးအတွက် Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) အတွက်ဆုလာဘ် sensitivity ကိုနှင့်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြ59,60] ။ အဆိုပါ 10-ထပ် allele [hyperactivity-Impulse (HI) ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့အသေးစားပေမယ့်သိသိသာသာအသင်းအဖွဲ့ရှိပါတယ်61].
မြေပုံဆုကြေး Gene နှင့် RDS
dopaminergic ဗီဇမျိုးကွဲများနှင့်အခြား neurotransmitters ပိုင်ဆိုင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ထကြွလွယ်သောသဘောသဘာဝများအတွက်ပံ့ပိုးမှု (ဥပမာ DRD2, DRD3, DRD4, DAT1, COMT, MOA-A, SLC6A4, Mu, ဂါဘမြို့သားB) (ထို mesocorticolimbic စနစ်တခုသက်ရောက်မှုရှိသည်သောစွန့်စားမှု antecedents အဖြစ်ဤအ alleles implicating အသင်းအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူတွေများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇအန္တရာယ်သရုပ်ဖော်အရေးကြီးသောလေ့လာမှုအတော်များများမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်စားပွဲတင် 1) ။ LifeGen, Inc နှင့်ဂုဏ်တော်ရှာဖွေရေးနှင့် တွဲဖက်. ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်း, Inc (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်လွှားတဆယ်နှစ်လုံးကို select လုပ်ပါစင်တာများမျိုးဗီဇစွဲအန္တရာယ်ရမှတ်™ဟုခေါ်တွင် RDS များအတွက်လူနာရဲ့မျိုးရိုးဗီဇအန္တရာယ်ဆုံးဖြတ်ရန်ပထမဦးဆုံးအစဉ်အဆက်မူပိုင်ခွင့်မျိုးရိုးဗီဇစမ်းသပ်မှုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းထွက်တင်ဆောင်လာသောဖြစ်ပါတယ် GARS) ။
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Reward မျိုးဗီဇနှင့် RDS - (တစ် ဦး ကနမူနာ) ။
သင်၏နောက်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် Submit နှင့် OMICS Group မှတင်ပြချက်များ၏အားသာချက်များရ
ထူးခြားတဲ့ features တွေ
အသုံးပြုသူ 50 ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ဘာသာစကားများရန်သင့်စက္ကူဖော်ရွေ / ဖြစ်နိုင်က်ဘ်ဆိုက်-ဘာသာပြန်ချက်
ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစက္ကူ audio ဗားရှင်း
250 ပွင့်လင်း Access ကိုဂျာနယ်များ
(တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) PubMed, Scopus, DOAJ, EBSCO, အညွှန်းကိန်း Copernicus နှင့် Google Scholar စသည်တို့မှာ indexing
Option ကိုဝေမျှခြင်း: လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့ Enabled
အွန်လိုင်းသိပ္ပံချေးငွေနှင့်အတူဆုခခြံစာရေးဆရာများ, Review နှင့်အယ်ဒီတာများ
သင့်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆောင်းပါးများအဘို့ သာ. ကောင်း၏လျှော့စျေး
မှာသင့်ရဲ့လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ် Submit: http://www.editorialmanager.com/omicsgroup/
အဆိုပါစာရေးဆရာမာဂရက်အေ Madigan နှင့် Paula ဂျေ Edge ကနေကျွမ်းကျင်သူအယ်ဒီတာအဖွဲ့ input ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ ကျနော်တို့ Eric R. Braverman, Raquel Lohmann, ဂျုံး Borsten, BW Down, ရော်ဂျာအယ်လ်ချောင်းမြောင်း, မာရိ Hauser ဂျွန် Femino, ဒါဝိဒ်သည်အီးစမစ်နှင့်သောမတ်စ် Simpatico အားဖြင့်မှတ်ချက်များကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ Marlene အော်စကာ Berman ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institutes, NIAAA RO1-AA07112 နှင့် K05-AA00219 နှင့်စစ်ပြန်ရေးရာအမေရိကန်ဦးစီးဌာန၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနဝန်ဆောင်မှုထံမှထောက်ပံ့ငွေများလက်ခံရရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းအမှုအစီရင်ခံစာ input ကိုကရင် Hurley, ဘက်စုံစွဲလေ့လာမှုများအမျိုးသား Institute ၏အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ, မြောက်အမေရိကမိုင်ယာမီကမ်းခြေဖလော်ရီဒါအသိအမှတျပွု။ in-တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဤဆောင်းပါးကိုဘဝကအိတ်စတန်းရှင်းဖောင်ဒေးရှင်းမှ Path ကိုအခြေခံအုတ်မြစ်နယူးယော့မှချီးမြှင့်မယ့်ခမ်းနားကထောက်ခံခဲ့သည်။
ဤသည်အသိအမှတ်ပြုကြသည်မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ Open-access ကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုရသောကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေဆောင်းပါး, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွားဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးစီးပွား၏ပဋိပက္ခ LifeGen, Inc. Lederach, PA သို့သီးသန့်လိုင်စင်ချပေးထားသည့် RDS ၏ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသခြင်းဆိုင်ရာအမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံခြားမူပိုင်ခွင့်များစွာရှိသည်။ Dominion Diagnostics, LLC, North Kingstown, Rhode Island နှင့် LifeGen, Inc. နှင့်အတူ GARS ၏စီးပွားဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သည်။ John Giordano သည် LifeGen, Inc တွင်လည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည်။ အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအခြားပconflictsိပက္ခများမရှိပါ။ စာရေးသူအားလုံးသည်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်သည်။
1. Blum K ကို Payne ဂျေ အရက်နှင့်စွဲစေသည့် ဦး နှောက်။ ရှိမုန် & Schuster အခမဲ့စာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်နှင့်လန်ဒန်: နှင့်အတူ 1990 ။
2. Platania သမဝါယမ, Salomon S က, Leggio GM က, Drago က F, dopamine D2 နှင့် D3 receptors ၏ Bucolo C. Homology မော်ဒယ်: မော်လီကျူးဒိုင်းနမစ်သနျ့နဲ့ docking အကဲဖြတ်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012;7: e44316 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
3. Salamone JD ကော်ရဲရားအမ် mesolimbic dopamine ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်စိတ်ခွန်အားနိုးလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2012;76: 470-485 ။ [PubMed]
4. Sinha R. စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်စွဲလမ်း။ ခုနှစ်တွင်: Brownell ကယ်လီဃ, ရွှေ, Mark အက်စ်, အယ်ဒီတာများ။ အစားအစာနှင့်စွဲလမ်းမှုမြား: A ဘက်စုံလက်စွဲစာအုပ်။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2012 ။ စစ။ 59-66 ။
5. et al Blum K ကို Werner T က, Carnes S က, Carnes P ကို, Bowirrat တစ်ဦး။ လိင်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ရော့ခ် 'n' လိပ်: ဆုလာဘ်မျိုးဗီဇ polymorphic တစ် function ကိုအဖြစ်ဘုံ mesolimbic activation hypothesizing ။ J ကို Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး။ 2012;44: 38-55 ။ [PubMed]
6. ရွှေက MS ။ ရာဘေးကနေခုံတန်းရှည်ဖို့နဲ့နောက်ကျောနောက်တဖန်: တစ် 30 နှစ် Saga ။ Physiol ပြုမူနေ။ 2011;104: 157-161 ။ [PubMed]
7. Blumenthal DM, ရွှေက MS ။ အလွဲသုံးမှုနှင့်စား၏မူးယစ်ဆေးဝါးအကြားဆက်ဆံရေး။ ခုနှစ်တွင်: Brownell ကယ်လီဃ, ရွှေ, Mark အက်စ်, အယ်ဒီတာများ။ အစားအစာနှင့်စွဲလမ်းမှုမြား: A ဘက်စုံလက်စွဲစာအုပ်။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်: 2012 ။ စစ။ 254-265 ။
8. Blum K ကိုရွှေက MS ။ တစ်ဦးအယူအဆ: ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် meso-limbic circuitry ၏ Neuro-ဓာတု activation relapse ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Med ယူဆချက်။ 2011;76: 576-584 ။ [PubMed]
9. Avena မိုင်, Rada P ကို, Hoebel BG ။ သကြားစွဲလမ်းများအတွက်သက်သေအထောက်အထား: ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း, အလွန်အကျွံသကြားစားသုံးမှု၏အမူအကျင့်များနှင့် neurochemical ဆိုးကျိုးများ။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2008;32: 20-39 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
10 ။ ဝမ် GJ, Volkow ND, Thanos PK, မုဆိုး JS ။ ဦးနှောက် dopamine လမ်းကြောင်း၏ imaging: အဝလွန်ကိုနားလည်ဘို့ဂယက်ရိုက်။ J ကိုစွဲ Med ။ 2009;3: 8-18 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
11 ။ Volkow ND, ဝမ် GJ, Tomasi: D, Baler RD ။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အစွဲ: neurobiological ထပ်နေ။ အဝလွန်ခြင်းဗျာ 2013;14: 2-18 ။ [PubMed]
12 ။ Skibicka KP, Hansson က C, Egecioglu အီး, Dickson SL ။ အစားအစာဆုလာဘ်အတွက် ghrelin ၏အခန်းက္ပ: sucrose Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် mesolimbic dopamine အပေါ် ghrelin ၏သက်ရောက်မှုနှင့် acetylcholine receptor မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2012;17: 95-107 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
13 ။ Lindblom J ကို, Johansson တစ်ဦးက, Holmgren တစ်ဦးက, Grandin အီး, Nedergårdကို C, et al ။ နာတာရှည်အစာကိုကန့်သတ်ပြီးနောက်အထီးကြွက်များ၏ VTA အတွက် tyrosine hydroxylase နှင့် dopamine ပို့ဆောင်ရေး mRNA အဆင့်ဆင့်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2006;23: 180-186 ။ [PubMed]
14 ။ et al ပက်တာက TA, Brot MD, Zavosh တစ်ဦးက, Schenk Jo, Szot P ကို။ အစားအသောက်ဆင်းရဲချို့တဲ့ကြွက် dopamine ပို့ဆောင်ရေး mRNA နှင့်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းစေပါသည်။ Neuroendocrinology ။ 1998;68: 11-20 ။ [PubMed]
15 ။ Ifland JR, Preuss HG, Marcus MT, Rourke KM, တေလာ WC, et al ။ သန့်စင်ပြီးအစားအသောက်စွဲလမ်း: တစ်ဂန္ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ။ Med ယူဆချက်။ 2009;72: 518-526 ။ [PubMed]
16 ။ Roitman MF, ပက်က TA, Sakai က RR, Bernstein IL, Figlewicz DP ။ ဆိုဒီယမ်တွေပျက်စီးမှုနှင့် aldosterone striatum နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine Transporter လှုပ်ရှားမှုလျော့ပေမယ့်မ။ နံနက် J ကို Physiol ။ 1999;276: R1339-1345 ။ [PubMed]
17 ။ Cocores ဂျာရွှေက MS ။ ဆားစားနပ်ရိက္ခာစွဲ Hypothesis ကျော်နှင့်အဝလွန်ခြင်းကပ်ရောဂါရှင်းပြပေမည်။ Med ယူဆချက်။ 2009;73: 892-899 ။ [PubMed]
18 ။ Roitman MF, Schafe GE က, သီရဲလ် TE, Bernstein IL ။ Dopamine နှင့်ဆိုဒီယမ်အစာစားချင်စိတ်: ရန်ကြွက်များတွင် NaCl ဖြေရှင်းချက်၏အတုအယောင်အရက်သောက်ဖိနှိပ်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 1997;111: 606-611 ။ [PubMed]
19 ။ Koob, G, Kreek MJ ။ စိတ်ဖိစီးမှု, မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ်လမ်းကြောင်း၏ dysregulation နှင့်မူးယစ်ဆေးမှီခိုဖို့အကူးအပြောင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007;164: 1149-1159 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20 ။ Bruijnzeel AW, Zislis, G, Wilson ကနေ C, ရွှေက MS ။ CRF receptors ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကြွက်များတွင်မိုးရွာသွန်းမှုနီကိုတင်းရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်နွယ်ဦးနှောက်ဆုလာဘ် function ကိုအတွက်လိုငွေပြမှုကာကွယ်ပေးသည်။ Neuropsychopharmacology ။ 2007;32: 955-963 ။ [PubMed]
21 ။ Dackis, CA, ရွှေက MS ။ ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုထံမှထွက်ပေါ်လာသော Psychopathology ။ ခုနှစ်တွင်: ရွှေက MS, Slaby AE, အယ်ဒီတာများ။ ပစ္စည်းအလွဲသုံးမှုအတွက် dual Diagnosis ။ Marcel Dekker Inc မှ .; နယူးယောက်: 1991 ။ စစ။ 205-220 ။
22 ။ Olsen CM ။ သဘာဝဆုလာဘ်, neuroplasticity နှင့် Non-အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ Neuropharmacology ။ 2011;61: 1109-1122 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
23 ။ Bunzow JR, ဗန် Tol နာရီ, ယူဆပါတယ် DK, အဲလ်ဘတ် P ကို, အလှပြင်ဆိုင် J ကို, et al ။ တစ်ဦးကြွက် D2 dopamine အဲဒီ receptor cDNA ၏ကိုယ်ပွားနှင့်စကားရပ်။ သဘာဝ။ 1988;336: 783-787 ။ [PubMed]
24 ။ et al Blum K ကို Noble EP, Sheridan PJ, Montgomery တစ်ဦးက, Ritchie T က။ အရက်ထဲမှာလူ့ dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇ၏ Allelic အသင်းအဖွဲ့။ ဂျေအေအမ်အေ။ 1990;263: 2055-2060 ။ [PubMed]
25 ။ Noble EP, Blum K ကို Ritchie T က, Montgomery တစ်ဦးက, Sheridan PJ ။ အရက်ထဲမှာအဲဒီ receptor-စည်းနှောင်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အတူ D2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇ၏ Allelic အသင်းအဖွဲ့။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1991;48: 648-654 ။ [PubMed]
26 ။ Conrad KL, Ford ကား K ကို Marinelli M က, ME Wolf ။ Dopamine အဲဒီ receptor စကားရပ်များနှင့်ဖြန့်ဖြူးသည် dynamically ကင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက်ကြွက်နျူကလိယ accumbens အတွက်ပြောင်းပေးပါ။ neuroscience ။ 2010;169: 182-194 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
27 ။ ဟေဗာ: D, လက်သမား CL ။ စွဲလမ်းမျိုးဗီဇနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းမှဆက်ဆံရေး။ Mol Neurobiol ။ 2011;44: 160-165 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28 ။ Noble EP ။ စိတ်ရောဂါနှင့်အာရုံကြောချို့ယွင်းနှင့်၎င်း၏ phenotypes အတွက် D2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇ။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ B ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမျိုးဗီဇ။ 2003;116B: 103-125 ။ [PubMed]
29 ။ et al Blum K ကို Sheridan PJ, Wood က RC, Braverman ER, ချန်တီဂျေ။ ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ၏ပစ်မှတ်အဖြစ် D2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇ။ JR Soc Med ။ 1996;89: 396-400 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30 ။ Bowirrat တစ်ဦးက, dopaminergic neurotransmission, အရက်နှင့်ဆုကြေး Deficiency syndrome ရောဂါအကြားအော်စကာ Berman အမ်ဆက်ဆံရေး။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ B ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမျိုးဗီဇ။ 2005;132B: 29-37 ။ [PubMed]
31 ။ Gardner EL ။ စွဲလမ်းနှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်များနှင့် antireward လမ်းကြောင်း။ Adv Psychosom Med ။ 2011;30: 22-60 ။ [PubMed]
32 ။ Blum K ကို Gardner, E, အော်စကာ Berman က M, ရွှေအမ် "ကဲ့သို့" နှင့် Deficiency Syndrome (RDS) တံ့သောအကျိုးကိုထောက်နှင့်ဆက်စပ် "လို": ဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ် circuitry အတွက် hypothesizing differential ကို Response ။ Curr Pharm Des ။ 2012;18: 113-118 ။ [PubMed]
33 ။ et al Blum K ကိုချန် AL, ချန်တီဂျေ, Braverman ER, Reinking J ကို။ တစ်ဦးဝေဖန်သုံးသပ်ချက်: အစား mesolimbic dopaminergic ဆုလာဘ် circuitry ပိတ်ဆို့ခြင်း၏ activation ဆုလာဘ်ချို့တဲ့ရောဂါ (RDS) ၏ရေရှည်ကုသမယ့်ဦးစားပေးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Theor Biol Med မော်ဒယ်။ 2008;5: 24 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
34 ။ Bau CH, Almeida က S, Hutz MH ။ ပြင်းထန်မှုခန့်မှန်းအပေါ်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အန္တရာယ်ရှောင်ရှားခြင်းနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့နှင့်အပြန်အလှန်: ဘရာဇီးအတွက် dopamine D1 အဲဒီ receptor ဗီဇနှင့်အရက်၏ TaqI A2 allele ။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ။ 2000;96: 302-306 ။ [PubMed]
35 ။ Nemoda Z ကို, Szekely တစ်ဦး, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက် dopaminergic ဗီဇ polymorphic ၏ Sasvari-Szekely အမ် Psychopathological ရှုထောင့်။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2011;35: 1665-1686 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36 ။ ဝေါ်လ်တန် ME, အာရှရပင်ကို J, Jennings Ka, Croxson PL, Sharp က T က, et al ။ အဆိုပါ anterior cingulate cortex နဲ့ 6-hydroxydopamine နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍကိုနှိုင်းယှဉ်အော်ပရေတာအားထုတ်မှု-based ဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ်ကိုတွေ့ရှိရပါသည် accumbens ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2009;29: 1678-1691 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
37 ။ ချန်တီဂျေ, et al Blum K ကို Mathews: D, Fisher က L ကို, Schnautz N ကို။ ရောဂါဗေဒကျူးကျော်ရန်ဓာတ်ပါဝင်ပတ်သက် dopaminergic ဗီဇဖြစ်ပါသလား ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူမမှန်၏ psychiatricgenetic သုတေသနတွင် "စူပါပုံမှန်ထိန်းချုပ်မှု" ၏အရေးပါမှုကို Hypothesizing ။ Med ယူဆချက်။ 2005;65: 703-707 ။ [PubMed]
38 ။ ဆန် JP, Suggs LE, Lusk AV စနစ်, က Parker MO ကို, Candelaria-ကွတ် FT, et al ။ နျူကလီးယပ် accumbens နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်၏ dorsal striatum အတွက် dendritic အရှည်ပေါ်မှာကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုစဉ်အတွင်းအီသနော၏အလယ်အလတ်အဆင့်ထိတွေ့မှု၏ဆိုးကျိုးများ, စိမျးနှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ။ အရက်။ 2012;46: 577-584 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
39 ။ Shabani M က, Hosseinmardi N ကို, Haghani M က, Shaibani V ကို, အ CB1 cannabinoid agonist WIN 55212-2 မော်တာ function ကိုနှင့်ကြွက်သားစဉ်မြေးဆက်အတွက် cerebellar Purkinje အာရုံခံ၏အခ်ါ electrophysiological ဂုဏ်သတ္တိများအတွက်ခိုင်မာတဲ့အပြောင်းအလဲများကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန် Janahmadi အမ်မိခင်ထိတွေ့မှု။ neuroscience ။ 2011;172: 139-152 ။ [PubMed]
40 ။ Ying ကဒုတိယ W က, ဂျန် FF, Teng က C, Tai-Zhen အိပ်ချ် Apoptosis မွေးဖွားမီဘိန်းဖြူထိတွေ့ neurobehavioral teratogenicity အတွက်ပါဝင်ပါမည်နည်း Med ယူဆချက်။ 2009;73: 976-977 ။ [PubMed]
41 ။ Estelles J ကို, Rodriguez-Aria M က, Maldonado ကို C, Aguilar, MA, ကိုကင်းဖို့Miñarroဂျေကိုယ်ဝန်ထိတွေ့မှုကင်းဆုလာဘ်ပွောငျးလဲ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2006;17: 509-515 ။ [PubMed]
42 ။ Derauf ကို C, Kekatpure M က, Neyzi N ကို, မျ့ဘဲလျ B, သားသမီးများ၏ Kosofsky ခ Neuroimaging ကိုယ်ဝန်ဆောင်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုကအောက်ပါ။ seminal ဆဲလ် Dev မှ Biol ။ 2009;20: 441-454 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
43 ။ Novak, G, ဝါသနာရှင် T က, O'dowd BF, ဂျော့ခ်ျ SR ။ အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါရောဂါများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှု: Striatal ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဲ့ myelination အဖြစ်အပျက်အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ဗီဇစကားရပ်ကွန်ရက်များအတွက်တစ်ဦးကိုခလုတ်, ပါဝငျသညျ။ synapses ။ 2013;67: 179-188 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
44 ။ Bannon MJ, Michelhaugh SK ကို, ဝမ် J ကို, Sacchetti P. လူ့ dopamine Transporter ဗီဇ: ဗီဇအဖွဲ့အစည်းမှတ်တမ်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမမှန်အတွက်အလားအလာပါဝင်ပတ်သက်မှု။ EUR Neuropsychopharmacol ။ 2001;11: 449-455 ။ [PubMed]
45 ။ et al Inoue-Murayama M က, Adachi S က, Mishima N ကို, Mitani H ကို, Takenaka အို။ သတင်းထောက်ဗီဇစကားရပ်ထိခိုက်စေသောမျောက် dopamine Transporter မျိုးဗီဇ၏ 3'-ဘာသာ ပြန်. မရဘဲဒေသတွင်း၌တွဲဖက်ထပ်ပာ၏ variable ကိုအရေအတွက်အပြောင်းအလဲ။ neuroscience လက်တ။ 2002;334: 206-210 ။ [PubMed]
46 ။ Morónဂျာ Brockington တစ်ဦးက, ပညာရှိ RA, Rocha BA, မျှော်လင့်ခြင်း BT ။ အဆိုပါ dopamine ပို့ဆောင်ရေးအနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဦးနှောက်ဒေသများအတွက် norepinephrine Transporter မှတဆင့် Dopamine လွှာမှ: ခေါက်ထွက် mouse ကိုလိုင်းများအနေဖြင့်အထောက်အထား။ J ကို neuroscience ။ 2002;22: 389-395 ။ [PubMed]
47 ။ Yavich L ကို, Forsberg MM, Karayiorgou M က, Gogo ဂျာMännistö PT ။ prefrontal cortex နဲ့ dorsal striatum အတွင်း dopamine လျတ်အတွက် catechol-O-methyltransferase ၏ဆိုက်ကို-သတ်သတ်မှတ်မှတ်အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 2007;27: 10196-10209 ။ [PubMed]
48 ။ Schultz dopamine အာရုံခံ၏ဒဗလျူခန့်မှန်းဆုလာဘ် signal ကို။ J ကို Neurophysiol ။ 1998;80: 1-27 ။ [PubMed]
49 ။ တောရက်စ် GE, Gainetdinov RR, caron MG ။ plasma အမြှေးပါး monoamine ပို့ဆောင်ရေး: ဖွဲ့စည်းပုံ, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အ function ကို။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2003;4: 13-25 ။ [PubMed]
50 ။ Sonders က MS, Zhu SJ, Zahniser ရော်ဘာ, Kavanaugh အမတ်, Amara အဘိဓါန်စင်ကာပူဒေါ်လာ။ လူ့ dopamine ပို့ဆောင်ရေးအကွိမျမြားစှာ ionic conduction: dopamine နဲ့ psychostimulants ၏လုပ်ရပ်များ။ J ကို neuroscience ။ 1997;17: 960-974 ။ [PubMed]
51 ။ ဝီ DD, Edwards ကလေး, ချပ်မန်း BM, Ondo JG ။ ကြွက် striatal synaptosomes အတွက် dopamine လွှာမှ၏ဆိုဒီယမ်မှီခိုတဲ့မော်ဒယ်။ Neurochem Res ။ 1993;18: 927-936 ။ [PubMed]
52 ။ di Chiara G. အလှုံ့ဆျောမှုအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍ၏ရှုထောင့်ကနေကြည့်ရှုအားပေးမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 1995;38: 95-137 ။ [PubMed]
53 ။ Rodriguez ကို PC, Pereira DB, Borgkvist တစ်ဦးက, Wong က MY, Barnard, C, et al ။ ချောင်း dopamine tracer တစ်ဦးချင်းစီ dopaminergic synapses နှင့်ဦးနှောက်အတွက်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြေရှင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2013;110: 870-875 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54 ။ Vandenbergh DJ သမား။ neurotransmitter Transporter မျိုးဗီဇ၏မော်လီကျူးကိုယ်ပွား: cDNA ၏ဒေသ coding ကျော်လွန်ပြီး။ နည်းလမ်းများ Enzymol ။ 1998;296: 498-514 ။ [PubMed]
55 ။ Kilty je, Lorang: D, Amara အဘိဓါန်စင်ကာပူဒေါ်လာ။ တစ်ဦးကိုကင်း-အထိခိုက်မခံကြွက် dopamine ပို့ဆောင်ရေးကိုယ်ပွားနှင့်စကားရပ်။ သိပ္ပံ။ 1991;254: 578-579 ။ [PubMed]
56 ။ Vaughan RA, Kuhar MJ ။ domains များ binding Dopamine Transporter ligand ။ ကန့်သတ် proteolysis အားဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဂုဏ်သတ္တိများ။ J ကို Biol Chem ။ 1996;271: 21672-21680 ။ [PubMed]
57 ။ Sasaki T က, Ito က H ကို, Kimura Y ကို, Arakawa R ကို, Takano H ကို, et al ။ 18F-FE-PE2I နှင့်အတူပေသုံးပြီးလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine ပို့ဆောင်ရေးအရေအတွက်။ J ကို Nucl Med ။ 2012;53: 1065-1073 ။ [PubMed]
58 ။ du Y ကို, Nie Y ကိုလီ Y ကို, ဝမ် YJ ။ အဆိုပါ SLC6A3 VNTR 9-ထပ် allele နှင့်အရက်တစ် Meta-analysis သည်အကြားအသင်းအဖွဲ့။ အရက် Clin Exp Res ။ 2011;35: 1625-1634 ။ [PubMed]
59 ။ Hahn T က, Heinzel S က, Dresler T က, Plichta MM, Renner တီဂျေ, et al ။ အဆိုပါ ventral striatum နှင့်ရိုဆုလာဘ် sensitivity ကိုအတွက်ဆုလာဘ်-related activation အကြားအစည်းအရုံး dopamine Transporter genotype အားဖြင့်တည်းဖြတ်သည်။ Hum ဦးနှောက် Mapp ။ 2011;32: 1557-1565 ။ [PubMed]
60 ။ Drtilkova ငါ Seri အို Theiner P ကို, Uhrova တစ်ဦးက, Zackova M က, et al ။ ကလေးများအတွက် ADHD ၏လက်တွေ့နှင့်မော်လီကျူး-မျိုးရိုးဗီဇအမှတ်အသားများ။ Neuro Endocrinol လက်တ။ 2008;29: 320-327 ။ [PubMed]
61 ။ ယန်ခ, ချမ်း RC, ဂျင် J ကိုလီ T က, Sham P ကို, et al ။ dopamine Transporter ဗီဇနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ၏ 10'-UTR အတွက် VNTR polymorphic ၏ 3-ထပ် allele အကြားအသင်းအဖွဲ့လေ့လာမှု Meta-analysis သည်။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ B ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမျိုးဗီဇ။ 2007;144B: 541-550 ။ [PubMed]
62 ။ နဗီး MJ, ဂျွန်စ EC, ဝေါ်လ်တန် RT ကို။ ANKK1 ၏သတ်မှတ်ချက်နှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ: အနီးကပ်ခရိုမိုဆုန်းတီးဝိုင်း 2q11 အပေါ် DRD23.1 ဆက်စပ်တဲ့ဝတ္ထု kinase ဗီဇ။ Hum mutation ။ 2004;23: 540-545 ။ [PubMed]
63 ။ Blum K သည်, Wood က RC, Braverman ER, ချန်တီဂျေ, Sheridan PJ ။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောရောဂါတစ်ဦးခန့်မှန်းအဖြစ် D2 dopamine receptor မျိုးရိုးဗီဇ: Bayes '' theorem ။ Funct Neurol ။ 1995;10: 37-44 ။ [PubMed]
64 ။ ဟော့ဖ်မန်း ek, Hill က SY, Zezza N ကို, Thalamuthu တစ်ဦးက, သီတင်းပါတ် DE, et al ။ Dopaminergic ဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ: multiplexing အရက်မှီခိုမိသားစုများအတွက်အတွင်း-မိသားစုအသင်းအဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ B ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမျိုးဗီဇ။ 2008;147B: 517-526 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
65 ။ Dahlgren တစ်ဦးက, Wargelius HL, Berglund KJ, Fahlke ကို C, Blennow K သည်, et al ။ DRD2 A1 allele နှင့်အတူအရက်-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီ relapse တစ်ခုတိုးလာအန္တရာယ်ရှိသလား တစ်ဦးကလေယာဉ်မှူးလေ့လာမှု။ အရက်အရက်။ 2011;46: 509-513 ။ [PubMed]
66 ။ Kraschewski တစ်ဦးက, Reese J ကို, et al Anghelescu ငါဆောင်းရာသီ, G, Schmidt က LG က။ အရက်မှီခိုအတူ dopamine D2 receptor မျိုးရိုးဗီဇ၏အစည်းအရုံး: အဲဒီ receptor function ကိုနားလည်သဘောပေါက်ဘို့အဓိကအချက်အဖြစ်အရက်သမား၏ haplotypes နှင့်လူမျိုးကွဲ။ Pharmacogenet Genomics ။ 2009;19: 513-527 ။ [PubMed]
67 ။ Teh LK, Izuddin AF, MH FH, Zakaria ZA, Salleh MZ စ။ Tridimensional ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်ဘိန်းဖြူစွဲအကြား dopamine D2 အဲဒီ receptor ၏ polymorphic ။ Biol Res သူနာပြု။ 2012;14: 188-196 ။ [PubMed]
68 ။ ဗန် Tol နာရီ။ အဆိုပါ dopamine D4 အဲဒီ receptor ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အလုပ်လုပ်ဝိသေသလက္ခဏာများ။ Adv Pharmacol ။ 1998;42: 486-490 ။ [PubMed]
69 ။ လိုင် JH, Zhu YS, Huo ZH Sun, RF, ယု B, et al ။ schizophrenia, စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဘိန်းဖြူစွဲနှင့်အတူ DRD4 ၏ကမကထဒေသတွင်း၌ polymorphic ၏အစည်းအရုံးလေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res ။ 2010;1359: 227-232 ။ [PubMed]
70 ။ Biederman J ကို, အသေးသုံးငွေ CR, ဆယ်ပါး Haagen KS, အသေးစားဂျေ, ဒို AE, et al ။ အာရုံစူးစိုက်မှုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ၏သင်တန်းအပေါ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဗီဇ polymorphic ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2009;170: 199-203 ။ [PubMed]
71 ။ Faraone SV, ဒို AE, Mick, E, အ dopamine: D (7) အဲဒီ receptor မျိုးရိုးဗီဇနဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ၏ 4-ထပ် allele အကြားအသင်းအဖွဲ့များ၏ Biederman ဂျေတွင် Meta-analysis သည်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;158: 1052-1057 ။ [PubMed]
72 ။ Grzywacz တစ်ဦးက, Kucharska-Mazur J ကို, အရက်မှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် dopamine D4 receptor မျိုးရိုးဗီဇ exon3၏ Samochowiec ဂျေအစည်းအရုံးလေ့လာမှုများ။ စိတ်ရောဂါ Pol ။ 2008;42: 453-461 ။ [PubMed]
73 ။ Kotler M က, Cohen ကို H ကို, et al Segman R ကို, Gritsenko ငါ Nemanov L ကို။ opioid-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက်ပိုလျှံ dopamine D4 အဲဒီ receptor (D4DR) exon III ကိုခုနစျယောထပ် allele ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997;2: 251-254 ။ [PubMed]
74 ။ Byerley W က, Hoff M က, Holik J ကို, caron MG, လူ့ dopamine Transporter ဗီဇ (DAT1) အတွက် Giros ခ VNTR polymorphic Hum Mol မျိုးရိုးဗီဇ။ 1993;2: 335 ။ [PubMed]
75 ။ Galeeva AR, Gareeva AE, Iur'ev eb, Khusnutdinova ek ။ အထီး opiate စွဲအတွက် serotonin သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် dopamine Transporter မျိုးဗီဇ၏ VNTR polymorphic ။ Mol Biol (Mosk) 2002;36: 593-598 ။ [PubMed]
76 ။ Reese J ကို, Kraschewski တစ်ဦးက, et al Anghelescu ငါဆောင်းရာသီ, G, Schmidt က LG က။ dopamine နှင့် serotonin Transporter မျိုးဗီဇ၏ Haplotypes အရက်သမားအတွက် antisocial ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ စိတ်ရောဂါမျိုးဗီဇ။ 2010;20: 140-152 ။ [PubMed]
77 ။ ကွတ် Eh, Jr က Stein, MA, Krasowski MD, ကော့ NJ, Olkon DM, et al ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှုရောဂါနှင့် dopamine Transporter ဗီဇ၏အသင်းမှ။ နံနက် J ကို Hum မျိုးရိုးဗီဇ။ 1995;56: 993-998 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
78 ။ Lee ကအက်စ်အက်စ်, Lahey BB, Waldman ငါဗန် Hull, CA, Rathouz P ကို, et al ။ ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးရှစ်နှစ် longitudinal လေ့လာမှုမှာနှောင့်အယှက်အပြုအမူမမှန်နှင့်အတူ dopamine Transporter genotype ၏အသင်းမှ။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ B ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမျိုးဗီဇ။ 2007;144B: 310-317 ။ [PubMed]
79 ။ ပင်ဖြစ်သည် AF, Frank B, Ellenbroek B, Cool တစ်ဦးက, de Jong က, CA, et al ။ အရက်မှီခိုနှင့် COMT Val158Met နှင့် DRD2 Taq1A genotype ၏အခန်းကဏ္ဍကိုတစ်ခုအလယ်အလတ် phenotype အဖြစ်လျှော့ချ dopamine အဲဒီ receptor sensitivity ကို။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012;69: 339-348 ။ [PubMed]
80 ။ Nedic, G, Nikolac M က, Sviglin KN, နှားခြေးမွငျးခြေး-Seler: D, Borovecki က F, et al ။ တစ်ဦး functional catechol-O-methyltransferase (COMT) Val108 / 158Met polymorphic နှင့်အရက်မှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက်မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ကြိုးစားခြင်း၏အစည်းအရုံးလေ့လာမှု။ int J ကို Neuropsychopharmacol ။ 2011;14: 377-388 ။ [PubMed]
81 ။ Demetrovics Z ကို, Vargas, G, Szekely တစ်ဦးက, Vereczkei တစ်ဦးက, Csorba J ကို, et al ။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းအသစ်အဆန်း opiate-မှီခိုလူနာရှာအံ့သောငှါနှင့် catechol-O-methyltransferase Val (158) Met polymorphic အကြားအသင်းမှ။ Compr စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2010;51: 510-515 ။ [PubMed]
82 ။ et al Baransel Isir AB, Oguzkan S က, Nacak M က, Gorucu S က, Dulger HE ။ ဆေးခြောက်မှီခိုဖို့ catechol-O-methyl transferase Val158Met polymorphic နှင့်လွယ်ကူစွာထိခိုက်။ J ကို Forensic Med Pathol ဖြစ်၏။ 2008;29: 320-322 ။ [PubMed]
83 ။ Merenäkk L ကို, Mäestu J ကို, Nordquist N ကို, Parik J ကို, Oreland L ကို, et al ။ အဆိုပါ serotonin Transporter (5-HTTLPR) ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်α2A-adrenoceptor (ကို C-1291G) genotype ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုအပေါ်: တစ် longitudinal လေ့လာမှု။ Psychopharmacology (Berl) 2011;215: 13-22 ။ [PubMed]
84 ။ et al ဗန် der Zwaluw CS, အိန်ဂျယ် RC, Vermulst AA ကို, နှင်းဆီ RJ, Verkes RJ ။ တစ်ဦးက serotonin Transporter polymorphic (5-HTTLPR) ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုခန့်မှန်းထားပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2010;112: 134-139 ။ [PubMed]
85 ။ Kosek အီး, Jensen KB, Lonsdorf တီဘီ, Schalling M က, အ serotonin Transporter မျိုးရိုးဗီဇအတွက် Ingvar အမ်မျိုးဗီဇမူကွဲ (5-HTTLPR, rs25531) လူသားများတွင်ရေတိုသရုပ်ဆောင် opioid Remifentanil ဖို့ analgesic တုံ့ပြန်မှုသြဇာလွှမ်းမိုး။ Mol နာကျင်မှု။ 2009;5: 37 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
86 ။ ray R ကို, Ruparel K ကို Newberg တစ်ဦးက, Wileyto EP, Loughead JW, et al ။ လူ့ Mu Opioid receptor (OPRM1 A118G) polymorphic ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်အလားအလာ binding ဦးနှောက် mu-opioid အဲဒီ receptor နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2011;108: 9268-9273 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
87 ။ Szeto CY, တန် NL, Lee က၎င်းကို, Stadlin အေအသင်းမှ mu opioid receptor မျိုးရိုးဗီဇ polymorphic နှင့်တရုတ်ဘိန်းဖြူစွဲအကြား။ Neuroreport ။ 2001;12: 1103-1106 ။ [PubMed]
88 ။ Bart, G, Kreek MJ, Ott J ကို, LaForge KS, Proudnikov: D, et al ။ အလယ်ပိုင်းဆွီဒင်အတွက်အရက်မှီခိုနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ mu-opioid receptor မျိုးရိုးဗီဇ polymorphic နှင့်ဆက်စပ်သောတိုးမြှင့်တွေကပေါ်ကနေအန္တရာယ်။ Neuropsychopharmacology ။ 2005;30: 417-422 ။ [PubMed]
89 ။ ခန်းမ FS, Sora အဘိဓါန်ငါ Uhl ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ အီသနောစားသုံးမှုနှင့်ဆုလာဘ် mu-opiate အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာလျော့နည်းသွားနေကြသည်။ Psychopharmacology (Berl) 2001;154: 43-49 ။ [PubMed]
90 ။ Namkoong K ကို Cheon Ka ကင်မ် JW, ဇွန် JY, Lee က JY ။ dopamine D2 ၏အစည်းအရုံးလေ့လာမှု, D4 receptor မျိုးရိုးဗီဇ, ဂိဗာမွို့အဲဒီ receptor beta ကို subunit ဗီဇ, ကိုရီးယားထဲမှာအရက်သမား၏ကလေးများနှင့်အတူ serotonin Transporter ဗီဇ polymorphic: တစ်ပဏာမလေ့လာမှု။ အရက်။ 2008;42: 77-81 ။ [PubMed]
91 ။ Mhatre M က, Ticku MK ။ နာတာရှည်အီသနောကုသဂါဘမြို့သားအဲဒီ receptor beta ကို subunit စကားရပ် upregulates ။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res ။ 1994;23: 246-252 ။ [PubMed]
92 ။ Young က RM, Lawford BR, Feeney gf, Ritchie T က, Noble EP ။ အရက်-related မျှော်လင့်ထားသည့် D2 dopamine အဲဒီ receptor နှင့်ဂိဗာမွို့အဲဒီ receptor beta3 subunit မျိုးဗီဇနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2004;127: 171-183 ။ [PubMed]
93 ။ Feusner J ကို, Ritchie T က, Lawford B, Young က RM, Kann B, et al ။ ဂါဘမြို့သားတစ်ဦး Post-စိတ်ထိခိုက်စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါလူဦးရေအတွက် (A) ကိုအဲဒီ receptor beta ကို3subunit ဗီဇနှင့်စိတ်ရောဂါရောဂါ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2001;104: 109-117 ။ [PubMed]
94 ။ Noble EP, Zhang က X ကို, Ritchie T က, Lawford BR, Grosser SC, et al ။ D2 dopamine အဲဒီ receptor နှင့်ဂါဘမြို့သား (က) အဲဒီ receptor beta3 subunit ဗီဇနှင့်အရက်။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 1998;81: 133-147 ။ [PubMed]
95 ။ Nikulina V ကို, Widom CS, Brzustowicz LM ။ ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းနှင့်လစ်လျူရှု, MAOA နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေးရလဒ်များ: တစ်အလားအလာစာမေးပွဲ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012;71: 350-357 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
96 ။ et al Alia-Klein N ကို, Parvaz MA, Woicik PA ဆိုပြီး, Konova AB, Maloney T က။ ကိုကင်းစွဲအတွက် orbitofrontal မီးခိုးရောင်ကိစ္စအပေါ်ရောဂါအပြန်အလှန်×ဗီဇ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011;68: 283-294 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
97 ။ Nilsson KW, Comasco အီး, Åslundကို C, Nordquist N ကို, Leppert J ကို, et al ။ MAOA genotype, မိသားစုဆက်ဆံရေးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရက်သောက်ဖို့စပ်လျဉ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှု။ စှဲလမျးသူ Biol ။ 2011;16: 347-355 ။ [PubMed]
98 ။ Treister R ကို, Pud: D, Ebstein RP, Laiba အီး, ဂေရရှုန်, E, et al ။ ကျန်းမာသန်စွမ်းသောလူသားမြားအတွက် dopamine neurotransmitter လမ်းကြောင်းမျိုးဗီဇနှင့်နာကျင်မှုတုံ့ပြန်မှုအတွက် polymorphic အကြားအသင်းအဖွဲ့များ။ နာကျင်မှု။ 2009;147: 187-193 ။ [PubMed]
99 ။ Tikkanen R ကို, et al Auvinen-Lintunen L ကို, Ducci က F, Sjöberg RL, Goldman: D ။ အကြမ်းဖက် reconvictions ၏ခန့်မှန်းအဖြစ် Psychopathy, PCL-R, နှင့် MAOA genotype ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res ။ 2011;185: 382-386 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
100 ။ Gokturk ကို C, Schultz က S, Nilsson KW, ဗွန် Knorring L ကို, Oreland L ကို, et al ။ serotonin Transporter (5-HTTLPR) နှင့် monoamine oxidase (MAOA) ပြင်းထန်ရက်နှင့်အတူအမျိုးသမီးကမကထ polymorphic ။ Arch အမျိုးသမီး Ment ကနျြးမာရေး။ 2008;11: 347-355 ။ [PubMed]
101 ။ Contini V ကို, Marques FZ, Garcia ကအီး, Hutz MH, Bau CH ။ ထကြွလွယ်သောအပြုအမူများနှင့်အရက်မှီခိုအတူအသင်းအဖွဲ့များအတွက်ထပ်မံထောက်ခံမှု: ဘရာဇီးနမူနာအတွက် MAOA-uVNTR polymorphic ။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇ B ကိုအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါမျိုးဗီဇ။ 2006;141B: 305-308 ။ [PubMed]
102 ။ Lee က SY, ချန် SL, ချန် SH, Chu CH, Chang YH, et al ။ Subtype စိတ်ကြွရောဂါအတွက် DRD3 နှင့် BDNF ဗီဇမျိုးကွဲများ၏ interaction ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2012;39: 382-387 ။ [PubMed]
103 ။ လီ T က, Hou Y ကို, Cao W က, ယန် CX, ချန် T က, et al ။ Basal nociception စည်းမျဉ်းနှင့်မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင်သည်းခံစိတ်နဲ့ဆုတ်ခွာအတွက် dopamine D3 receptors ၏အခန်းက္ပ။ ဦးနှောက် Res ။ 2012;1433: 80-84 ။ [PubMed]
104 ။ Vengeliene V ကို, et al Leonardi-Essmann က F, Perreau-Lenz S က, Gebicke-Haerter P ကို, Drescher K သည်။ အဆိုပါ dopamine D3 အဲဒီ receptor အရက်-ရှာခြင်းနှင့် relapse အတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ FASEB ဂျေ 2006;20: 2223-2233 ။ [PubMed]
105 ။ Mulert ကို C, Juckel, G, Giegling ငါ Pogarell အို Leicht, G, et al ။ အဆိုပါ dopamine D9 receptor မျိုးရိုးဗီဇ (DRD3) နှင့်ဖြစ်ရပ်-related P3 အလားအလာအတွက်တစ်ဦးက Ser300Gly polymorphic ။ Neuropsychopharmacology ။ 2006;31: 1335-1344 ။ [PubMed]
106 ။ et al Limosin က F, Romo L ကို, Batel P ကို, Adès J ကို, ဘိုနီကို C ။ အရက်-မှီခိုယောက်ျားအတွက် dopamine အဲဒီ receptor D3 ဗီဇ Bali polymorphic နှင့်သိမြင်မှု Impulse အကြားအသင်းမှ။ EUR စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005;20: 304-306 ။ [PubMed]
107 ။ Duaux အီး, Gorwood P ကို, Griffon N ကို, et al Bourdel MC, Sautel F ကို။ အဆိုပါ dopamine D3 receptor မျိုးရိုးဗီဇမှာ Homozygosity opiate မှီခိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998;3: 333-336 ။ [PubMed]
108 ။ Spangler R ကို, Wittkowski KM, Goddard NL, Avena မိုင်, Hoebel BG, et al ။ ကြွက်ဦးနှောက်၏ဆုလာဘ်ဒေသများရှိမျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်သကြား Opiate ကဲ့သို့သောဆိုးကျိုးများ။ ဦးနှောက် Res Mol ဦးနှောက် Res ။ 2004;124: 134-142 ။ [PubMed]
109 ။ လာ DE, Gonzalez N ကို, Wu က S, Saucier, G, ဂျွန်ဆင် P ကို, et al ။ ကိုကင်းမှီခိုအတွက် dopamine DRD3 receptor မျိုးရိုးဗီဇမှာ Homozygosity ။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999;4: 484-487 ။ [PubMed]